Ciidan ka soo degay xeebta Awdal - BBC News Somali
Ciidan ka soo degay xeebta Awdal
Image caption Wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland, Maxamed Cabdi Gaboose
Labada taliye guud ee ciidamada Milleteriga iyo boliiska Somaliland General Nuux Ismaaciil taani iyo general Cilmi Rooble Furre ayaa shir jaraa'id oo caawa ay ku qabteen Hargeysa faah-faahin kaga bixiyay ciidamo hubeysan oo laga soo dejiyay xeebta u dhaxaysa lughaya iyo saylac oo la tuhunsanyahay inay yihiin jabhadda ONLF .
Goobta shirkaasi jaraa'id oo ahayd xarunta C. I. D ee Hargeysa waxaa labada taliye ku soo bandhigeen hub iyo doccumment ay sheegeen in laga helay ciidankaasi , iyagoo sheegay in ciidankaasi oo lagu hereereysanyahay laga qabtay laba ka mid ah oo midkood dhaawac yahay.
Maamulka Somaliland ayaa saaka horey sheegay in ciidamadoodu ay ku hareereysan yihiin ciidan gaaraya laba boqol ilaa saddex boqol oo ka soo degay xeebta u dhexeysa Lughaya iyo Seylac.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland, Maxamed Cabdi Gabboose, ayaa BBC u sheegay in dadka deegaanku ay arkeen baabuur ilaa saddex gaareysa oo ciidan ka soo qaaday dhinaca xeebta, kadibna ku daadiyay dhul u dhaw buuraleyda Maarmaar, halkaasi oo uu sheegay inay galeen.
Gabboose ayaa sheegay in ciidamadu ay haatan kula hareereysan yihiin dhulka buuraleyda xadka u dhexeeya Somaliland, Ethiopia iyo Jabuuti.
Waxa uu sheegay in ay heleen hub iyo waraaqo ay ka tageen ciidamadaasi oo uu sheegay inay ku qornaayeen af Soomaali iyo af Amxaari, laakiin aanu xaqiijin karin cidda ay u malaynayaan, ilaa baaritaan lagu sameeyo.
Waxaa jira warar sheegaya in ciidamadaasi ay ka tirsan yihiin jabhadda ONLF ee la dagaalanta dowladda Ethiopia.